I-Apartment "El Bight" abantu abangu-4 (WIFI)
San Andrés, San Andres and Providencia, i-Colombia
I-ikhaya eliyindawo yokuhlala ephelele ibungazwe ngu-Luz
I-apartamento yami ihlanzekile, futhi ilungele ukwamukela imindeni noma abantu abangu-4 abafuna ukujabulela ukuhlala ngokunethezeka. inazo zonke izinsiza eziyisisekelo nezibalulekile ukuze ube nokuhlala okumnandi kakhulu. Kunamakamelo okulala ama-2, ikhishi, igumbi lokugezela kanye ne-patio yangasese. Umakhelwane uphephile . Eduze kunezitolo ezinkulu ezi-2, ikhemisi, ukudla okusheshayo. inyama yamalahle (i-BBQ)
Imizuzu emi-5 yokushayela kanye nemizuzu engama-20 uhamba ngezinyawo ukuya edolobheni. Ibhulokhi elilodwa kude uthola izinto zokuhamba zomphakathi, ibhasi, itekisi, i-moto taxi.
Kuleli fulethi kunamagumbi okulala ama-2 , igumbi lokugezela eli-1 , ikhishi/ igumbi lokudlela. Kukhona i-patio encane lapho ungashiswa khona yilanga ngasese. I-Apartment 4 abantu abaningi abahlala kuzo. Uzoba nawo wonke amafulethi akho.. futhi kunendawo yokupaka emgwaqweni ngaphambi kwefulethi, endaweni eyodwa kunenqola yeminyuzi eqashiswayo ukuya ngase-Island.
Indlu yami isendaweni ephephile.
Omakhelwane bawumndeni futhi banobungane .Ifulethi lami liseduze nezitolo ezinkulu zekhemisi, isibhedlela kanye nezinto zokuhamba zomphakathi endaweni eyibhulokhi elilodwa nje. idolobha kanye namabhishi kuseduze kakhulu imizuzu engu-15 ngemoto futhi kunezinhlobonhlobo ezinhle kakhulu zokuhamba.
umphathi kanye nomsingathi uzonikeza imiyalelo ku
isivakashi kanye nenombolo yocingo yanoma yimiphi imibuzo 24/7
Inombolo yepholisi: 98452
Hlola ezinye izinketho ezise- San Andrés namaphethelo